Isistimu Yamanje Eshintshayo kanye Nesistimu Yamanje Eqondile (Uhlelo Lwe-AC&DC), Uhlelo Lwamanje Olushintshayo lwase-China kanye Nesistimu Yamanje Eqondile (Uhlelo Lwe-AC&DC) Abakhiqizi, Abahlinzeki, Imboni - HNAC Technology Co., Ltd
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Qedela Amasethi Emishini Kagesi Nekagesi>Uhlelo lwe-AC&DC
1.Idivayisi yesistimu ye-DC inemisebenzi yokulinganisa ukude, ukusayinda okukude, isilawuli kude, njll., ekwazi ukubona ukusebenza okungagadiwe futhi ingahlangabezana nokusebenza okujwayelekile futhi iqinisekise ukuvulwa nokuvalwa kokuvikela ukudluliselwa, amadivaysi azenzakalelayo, isekethe yamandla kagesi aphezulu. ama-breaker, izibani zengozi kanye nekhompyutha aziphazamiseki ngaphansi kwezimo zengozi. Ukunikezwa kwamandla kunikeza amandla e-DC noma lapho amandla e-AC elahlekile, amandla e-AC anikezwa ngedivayisi eshintshashintshayo.
Ilungele izindawo ezidinga ugesi we-DC njengezitshalo zikagesi, iziteshi ezingaphansi, izitimela zikagesi, amakhemikhali e-petrochemicals, i-metallurgy, iziteshi zokushintsha nezakhiwo ezinkulu, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuphephile nokuthembekile kwemishini.
2.Idivayisi yokusabalalisa amandla e-AC yesisetshenziswa sesibili samandla sisekelwe ezinhlinzekweni ezifanele "zesikhungo samandla, ubunjiniyela be-Substation kanye ne-Relay Protection Test Configuration Quota" kanye noMnyango Wemboni Yamandla Kagesi "Ukuvikelwa Kwesistimu Yokudlulisa Amandla kanye Nezisetshenziswa Ezizenzakalelayo Zokuphepha. Izinyathelo Zokulwa Nengozi". Ukukhethwa kwama-breaker breaker miniature aphuka kakhulu kuvikela ukujikeleza okufushane kanye nokugcwala ngokweqile kwesekethe, kunikeza amandla esibili alula futhi anokwethenjelwa omsebenzi wemishini yesibili esizeni, futhi kunikeza isiqinisekiso esinokwethenjelwa sokuthuthukisa ikhwalithi yemisebenzi ehlukahlukene kanye nokuqinisekisa. ukuphepha kwabasebenzi kanye nemishini.
1.Izici zedivayisi yesistimu ye-DC:
Idivayisi yesistimu ye-Microcomputer elawulwa yi-high frequency switch ine-voltage ephezulu kanye nokunemba okungaguquki kwamanje, usayizi omncane, isisindo esilula, ukusebenza kahle okuphezulu, ukugeleza okuphumayo, ukuhlanekezela okuphansi kwe-harmonic, izinga eliphezulu lokuzishintshashintsha nokuthembeka okuphezulu, futhi ingahlonyiswa ngamabhethri e-cadmium Nickel, i-asidi. -amabhethri angenabufakazi kanye namabhethri e-lead-asidi alawulwa yi-valve angakwazi ukugadwa.
2. Ububanzi bokusetshenziswa kwedivayisi yesistimu ye-AC:
(1) Uma umthamo wokukhiphayo wedivayisi usulayishwe ngokugcwele, uzokhawulela ngokuzenzakalela ngaphandle kokulayisha ngokweqile;
(2) Lolu cingo lunomsebenzi wokuzihlola ngokwakho idivayisi, ukuzihlolela amaphutha, ukuzilulama kanye nokuphatha ngobuhlakani.
(3) Idivayisi ilawulwa njengomthombo wamanje ngesikhathi sokusebenza, futhi akukho nokwenzeka kokuzwakala kwe-impedance yesistimu.
UFrancis Turbine ovundlile weSiteshi samandla kagesi esincane nesimaphakathi